वरिष्ठ प्रगतिवादी साहित्यकार आनन्ददेव भट्टको निधन - Rastrakokhabar
काठमाडौं, १४ भदौ । वरिष्ठ प्रगतिवादी साहित्यकार एवं प्रगतिशील लेखक संघका पूर्व अध्यक्ष आनन्ददेव भट्टको निधन भएको छ ।
अल्जाइमर रोगबाट पीडित भट्टको भट्टको ८५ वर्षको उमेरमा सोमबार बिहान करिब तीन बजेतिर निधन भएको हो । गत महिना अस्पतालमा उपचारपछि उनी कालिकास्थान निवासमा बस्दै आएका थिए ।
लामो समय नेपाली साहित्य, प्राध्यापन र प्रगतिशील चिन्तनमा सक्रिय भट्टका काव्य, खण्डकाव्य, संस्मरण, समालोचना र निबन्धलगायतका विधाका साढे दुई दर्जनभन्दा बढी कृति प्रकाशित छन् । उनका विशेषगरी ‘साइँलीमैया’, ‘आमा बोलाउँछिन्,’ ‘९७ साल’, ‘अब हिमाल बोल्छ’, ‘जनताको साहित्य’ लगायत कृति लोकप्रिय छन् ।
वि.सं १९९३ मा जुम्लामा जन्मिएका भट्ट प्रगतिशील लेखक संघ र प्रगतिशील प्राध्यापक संघका पूर्वअध्यक्षसमेत थिए । उनको पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिने प्रगतिशील लेखक संघका अध्यक्ष प्रा. डा. जीवेन्द्रदेव गिरीले जानकारी दिएका छन ।
भट्टका श्रीमती र दुई छोरा छन् ।